ငါဒီကိုပြောရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ANGUS, THONGS နဲ့ PERFECT SNOGGING တွေကလုံးဝရှုပ်ထွေးသွားတယ် - သတင်း
ငါဒီကိုပြောရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Angus, Thongs နဲ့ Perfect Snogging တွေကလုံးဝရှုပ်ထွေးသွားတယ်
Angus, Thongs နှင့် Perfect Snogging သည်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏ငယ်စဉ်ကလေးဘ ၀ ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ၁၀ နှစ်အရွယ်ကနေစပြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကစားခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့သူကလုံးဝအထင်ကရအခိုက်အတန့်လေးများရရှိထားပြီးဟာသအချို့ဟာယနေ့ထိတိုင်ရှိနေဆဲပါ။ Quelle အံ့အားသင့်စရာ, Jas!
သို့သော် ၁၀ နှစ်အရွယ်လွမ်းဆွတ်မှုအကြည့်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြန်လည်စမ်းကြည့်ဖူးပါသလား။ ယောက်ျားတွေ၊ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှမိန်းကလေးများသည်ယောက်ျားလေးများကိုအာရုံစိုက်သည်၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းရသည်။ အဲဒါကဘာကိုသင်ပေးသလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုငါတို့မသိသေးဘူးလို့ငါထင်တယ်။
ပထမ ဦး စွာဂျော်ဂျီယာသည်ဒစ်ခ်ျအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာငါတို့အားလုံးဟာ knobheads တွေပဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဂျော်ဂျီယာကဒီရုပ်ရှင်တစ်လျှောက်လုံးမှာတော်တော်လေးရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေပါ။ သူမသည်ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုရည်းစားရရန်ကြိုးစားသည်၊ ထို့နောက်အတိအကျလုပ်ခြင်းကြောင့် Jas ကိုမုန်းသည်။ Lindsay ရဲ့မွေးနေ့ပါတီပွဲမှာသူမနဲ့သူမကိုခြိမ်းခြောက်တဲ့အတွက်သူမဟာ Jas ကို Shin ထဲမှာကန်ပါတယ်။ ဒီမိန်းကလေးမှာပြissuesနာရှိတယ်။
အဘယျသို့ကမ္ဘာ၌နှစ် ဦး ကိုတစ်နှစ်တာ 11s နှစ်နှစ်တစ်နှစ် 9s ချိန်းတွေ့မလဲ
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ Year 9S ရက်စွဲပါ Year 11s ဟာထူးဆန်းပြီးမိန်းကလေးတွေကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်နှစ်မှာဆွဲမထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူတို့သည်ရောဘတ်နှင့်တွမ်ကဲ့သို့သောမော်ဒယ်လ်အလားအလာရှိသော Cosmopolitan ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။
တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင်9ချိန်းတွေ့သောနှစ် 11 လည်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ မင်းအသက် ၂၀ ကျော်ရင် ၂ နှစ်ခြားတာကကောင်းတယ်။
ပတေရုသ Dyer စုစုပေါင်းတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးသည်
ငါတို့တွေအားလုံးသူ့ကိုရိုင်းစိုင်းတဲ့နမ်းရှုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကနေသတိရကြရဲ့လား။ သို့သော်သူသည်ဂျော်ဂျီယာကိုလိင်အရအပြည့်အ ၀ ဆက်ဆံပြီးသူမကိုချုံထဲတွန်းပို့သည့်နေရာတွင်သူတို့သွားသောပါတီပွဲတွင်သတိရပါသေးသည်။ မကြီးဘူး။ နမ်းခြင်းမြင်ကွင်းသည်အမှန်တကယ်တွင်ဤရုပ်ရှင်၌ပိုမိုသဘောတူသည့်အချိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့နောက်သူမအဆုံး၌သူမ၏မွေးနေ့ပါတီမှာအခြားမိန်းကလေးနှင့်အတူသူ့ကိုတက်သတ်မှတ်! ဂျော်ဂျီယာဟွန်း, မင်းကမိန်းမတွေကိုဒီကောင်လေးနဲ့ဝေးဝေးနေခိုင်းရမယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။
သူက Hugh Grant ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာမင်းကိုပြုံးပြနေတာကိုသူကပုံဖော်ထားတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အနီရောင်အလံမဟုတ်လျှင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
အဆိုပါ snogging စကေးအမှန်တကယ်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်
ဒီရုပ်ရှင်ကိုဘယ်သူ့ကိုမှကြည့်မနေခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့သင်ချက်ချင်းဆိုသလိုလျှာလျှာဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်လို့ခံစားခဲ့ရသလား။ ငါတို့ဟာသေးငယ်သောကလေးငယ်များဖြစ်သည်။ ငါတို့အသက်ရှူစရာမလိုဘဲ (၃) မိနစ်ကျော်ကျော်မှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနမ်းခြင်း၊ ၁၄ နှစ်အရွယ် ၁၄ နှစ်အရွယ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မည်မျှချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုရှိပါသလဲ။ !
'Boy stalking time' သည်တရားမ ၀ င်သောယောက်ျားများဖြစ်သည်
ဤရုပ်ရှင်၌မိန်းကလေးများကလူကိုအနိုင်ကျင့်သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမျှမဟုတ်ပါ။ Lindsay သည်သူမအိမ်အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိနေစဉ်မှန်ဘီလူးတစ်လုံးမှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတွေ့မြင်နေရသည်။
Slaggy Lindsay သည်ဤရုပ်ရှင်၏သားကောင်ဖြစ်သည်
ပထမ ဦး စွာဒီနာမည်ကဒီနေ့ပျံသန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဆို Lindsay မှာ Boob ကြီးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကြိုက်ရင်ကော။ သူမကဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ကားတစ်လျှောက်မှာ Thong နှင့်ကြက်သားအသားများကို ၀ တ်ဆင်သောကြောင့်စော်ကားခံခဲ့ရသည်။ ပြီးတော့ Jas ဟာသံကြိုးတစ်ချောင်းကိုစတင်ဝတ်ဆင်လိုက်ပြီးသူမက 'ပြောင်းလဲသွားပြီ' လို့ပြောတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာမင်းဟာဝတ်ဆင်ရင်စာတန်ရဲ့အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်။
Lindsay ရဲ့ကြက်သားအသားများကို Jas ကလူအစုအဝေးထဲလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး Robbie ကသူ့ရည်းစားများနှင့်မတူသည်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည်အနိမ့်ဆုံးလိင်အရအခွင့်အရေးမိုင်းကွင်းဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်ထဲဝင်တုန်းကပျော်ဖို့ကောင်းတာနဲ့ဂိမ်းများအားလုံးလား။ ဒါပေမယ့်ငါတို့က ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာလူတွေဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ 'ဂိမ်း' ကိုအိပ်စက်ခြင်းမှာကစားလေ့ရှိတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည့်မိန်းကလေးဖြစ်ပါကသင်အနေဖြင့်ထိုအကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးဘဝအတွက်သတိရလိမ့်မည်။
ဂျော်ဂျီယာကသူမရဲ့နှာခေါင်းလေးခုကိုလေးလေးနက်နက်သတ်မှတ်ခဲ့တာကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာပါပဲ။ အိပ်ကြ၊ မိန်းကလေးများ၊ သူမ၏ခံစားချက်များကိုကယ်ဖို့လိမ်! ဒီရုပ်ရှင်ကဒီလိုရက်စက်တဲ့အပြုအမူမျိုးကိုအားပေးတယ်။
nunga nungas ဖြစ်ပျက်လာအောင်မကြိုးစားပါနှင့် Dave၊
Bazoomas, nunga nungas ။ သူတို့ကို boobs လို့ပဲခေါ်ပါ။ Kinda သည်အလွန်ကလေးဆန်သောဤစကားလုံးများကို အသုံးပြု၍ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆွေးနွေးရန်သာမကခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံမှန်ပုံမှန်ချစ်နေရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်း Kinda ကထူးဆန်းသည်။ ရှုပ်ထွေးနေတယ်
Angus, Thongs နှင့် Perfect Snogging သည်အသက်မပြည့်သေးပါ။ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုရယ်မောစေခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကမ္ဘာကြီးအပေါ်ထားရှိသောအမြင်များနှင့်လည်းသင့်လျော်ပေမည်၊
ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများအနေဖြင့် Thongs များ ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းသည်အဆင်ပြေကြောင်း၊ ကြီးမားသော Boobs များထားရှိခြင်းသည်သဘာဝကျပြီးအမြဲတမ်းယောက်ျားလေး၏ချုံပုတ်ထဲသို့တွန်းပို့ခြင်းသည်အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဖြစ်သည်ဟုသင်ကြားရန်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပို၍ အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ ၃ မိနစ်လောက်နမ်းရှုပ်ခြင်းမရှိဘဲနမ်းတာကမင်းကိုသေစေနိုင်တယ်။
• ဤသည် Angus, Thongs နှင့် Perfect Snogging ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကြယ်များသည်ယခုအချိန်တွင်တူနေပါသည်
• ဤရွေ့ကား ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းအိပ်မောကျနေစဉ်အတွင်းဗြိတိသျှမိန်းကလေးများပြုခဲ့သမျှဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ၁၆ ခုဖြစ်သည်
• ဤသည်ကား Netflix ၏အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၂၇ ကားသင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်